5 Izizathu Ukuze Ride Night Izitimela EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Izizathu Ukuze Ride Night Izitimela EYurophu
Nakuba Europe ngobusuku obubodwa olele izitimela ayabaluleka into ye-iyisilwane esisengozini (isabelomali izindiza sibheke wena!), abathandi isitimela Namanje ukungayeki! Ukuze nomdlandla abathandi isitimela, lutho beats igxuma Egibela izitimela ebusuku futhi ejabulela ubuhle amabanga amade ngaphandle kokuthi baphule ebhange ukuze uthole lapho babeya.
Uma ubulokhu uhlela isitimela uhambo ebusuku phesheya kodwa ungaqiniseki ukuthi izitimela ebusuku kukhona ukhetho best, musa ukufunda ngezansi.
QAPHELA: Zonke sezizathu sinezinto sibeke ndawonye okungaphezu "ngoba temusho, ngeke bachithe 10+ amahora Ukuvuza amathe ehlombe lakho njengoba ikhanda lakho enyakazisa ngokumelene iwindi isitimela ".
Ebusuku Izitimela Ingabe Indleko Ngempumelelo
Ngokuba yilowo nalowo ohamba isabelomali (noma labo ngincamela echitha kakhulu imali esitsheni esihle futhi indawo kuka babephanga ku ithikithi), izitimela ebusuku kakhulu kukho isabelomali-friendly opt (ikakhulukazi i uhambo enwetshiwe). Ungalindela izindleko zakho unciphe ngesigamu uma esikhundleni amathathu noma amane nobusuku ehhotela (ngisho eyodwa esigabeni eshibhile) ne inani elifanayo nobusuku on isitimela, ukonga mayelana $500! Uma kungekona smart Ibhajethi, asazi ukuthi yini!
Isikhathi Ukwenza kahle ebusuku Izitimela & Comfort
Ukuphumelela travel isitimela akunakuphikwa! izitimela European kuyashesha, uhlelekile futhi konke owufunayo e kukho zokuthutha kungakhathaliseki uma uvakasha endaweni ethile eduze like Italy noma eminye uya khona. Ukuhamba ngesitimela kuhle ngoba wonke umuntu ufuna ukuba ngabokuqala emgqeni ehhovisi uhambo, zabo Museum ozithandayo kanye nanoma ikuphi lapho ngizolahlekelwe kuhlelwe ukuya. izitimela Night ikunikeza ithuba ngempela aphumule ngesikhathi ebusuku. Khona-ke sebenzisa emini ukujabulela langa sceneries ngefasitela ngesikhathi izitobhi isitimela.
Lecce Milan Izitimela
Reggio Calabria Milan Izitimela
Njengengubo nje izitimela njalo, izitimela ebusuku kukhona okungcono wokujikeleza inketho iplanethi yethu. Njengoba ukukhiqiza CO2 kude kancane umgibeli ngamunye ukwedlula izindiza ukwenza, kungaba yizo ukuthutha kwekusasa. Ngakho, uma imvelo bayazi, uyazi ukuthi indlela uzokhokhiswa ojikelezayo kusukela manje.
Levanto ukuze eTurin Izitimela
La Spezia ukuze eTurin Izitimela
Naples ukuze eTurin Izitimela
ERoma eTurin Izitimela
Ebusuku Izitimela iyindlela enhle Ukwenza Abangane
Uma ohamba yedwa, izitimela sininika ithuba ukuhlangabezana eziningi abantu kusuka Europe, zonke zahlukile esinye kwesinye. Thola ezimbalwa izinto ezifanayo ukuze ukhulume, futhi uke engase wenza abangane ukuphila! plus, okubalulekile nakakhulu kulesi sikhathi emhlabeni (okungenani isihloko esikuwo), usumtholile evikelekile, abantu okuthembekile ukwabelana ingalali yakho gumbi nge! izitimela Night iyamangalisa, kodwa sinazo nguwe angagcina idokodo nge kweqembu abantu ahone, ziyanuka (sorry!) noma ... nje ukukhwehlela okuningi. Ngakho, ukuthola iqembu lokho kuhle ingxoxo kanye nobusuku obungamashumi ezimbalwa egumbini efanayo enyinyekile kuhle!
Hewu, sicishe sikhohliwe ukufaka inzuzo eshukumisayo yaphakade yezitimela zasebusuku ezibizwa – ebabazekayo isikhalazo! Musa ukulala ngokusebenzisa Fjords, -Alps, nezinye sceneries enhle efanayo. Kodwa musa azizwe enesibopho esingakanani sokuba sihlale siphapheme njengoba uphase sezimboni zezimboni yaseJalimane, noma. Oh, futhi - thatha izithombe, ngisho noma ingama-kuphela ngefasitela!
Sazise nge tweeting nathi nganoma @SaveATrain! , Ungathola ezinye iziteshi zethu zenhlalo phansi Londoloza-A-zemininingwane futhi yebo, ungakwazi oda kithi athenge amathikithi esitimela ngemali.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-reasons-night-trains%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#night #trainlovers izitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelgermany travelitaly traveltips